Voasoratra eo am-pelatanany - Fiangonan'Andriamanitr'izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Voasoratra eo an-tanany
“Nihazona azy teny an-trotroako foana aho. Saingy tsy tsapan'ny vahoaka Israely fa ny soa rehetra nanjo azy ireo dia avy amiko »(Hosea 11: 3 Fanantenan'ny rehetra).
Rehefa nijery ny raharaha momba ny fitaovana aho dia nahita sigara feno sigara taloha iray, angamba nanomboka tamin'ny taona 60. Nosokafana io ka namboarina ny faritra mety ho lehibe indrindra. Nisy ny sarin'ilay mpampitambatra telo teboka sy torolàlana ny fomba hitaterana azy. Tsy fantatro hoe iza no nanoratra an'io tao anatin'izay taona maro izay, saingy nampahatsiahiviny ahy ny teniny hoe: "Soraty eo amin'ny faran'ny boaty sigara!" Angamba misy efa mahafantatra anao an'izany?
Mampahatsiahy ahy koa izany fa manoratra zavatra hafahafa Andriamanitra. Inona no tiako holazaina amin'izany? Eny, mamaky momba azy manoratra anarana eo amin'ny tanany isika. I Isaia dia milaza amintsika an'io fanambarana io ao amin'ny toko faha-49 amin'ny bokiny.Nanambara Andriamanitra ao amin'ny andininy 8-13 fa hanafaka ny Isiraely amin'ny fahababoana babyloniana amin'ny hery sy fifaliana lehibe izy. Mariho ny andininy faha-14-16. Nitaraina toy izao i Jerosalema: “Indrisy, Jehovah efa nandao ahy, eny, nanadino ahy hatry ny ela Izy”. Hoy anefa ny Tompo: “Manadino ny zanany va ny reny? Manana fo ve izy hamela ny zaza vao teraka ho any amin'ny laharany? Ary na dia nanadino aza izy dia tsy hanadino anao mihitsy aho! Voasoratra teo amin'ny felatanako tsy tapaka ny anaranao. " (HfA) Eto Andriamanitra dia manambara ny tsy fivadihany tanteraka amin’ny olony! Mariho fa mampiasa sary roa manokana izy, dia ny fitiavan-dreny sy ny fanoratana eo amin’ny tanany, fampahatsiahivana tsy tapaka ho an’ny tenany sy ho an’ny olony!
Raha mitodika any amin'i Jeremia isika izao ka mamaky ny teny izay lazain'Andriamanitra hoe: "Indreo, avy ny andro, hoy Jehovah, Izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'i Isiraely sy ny taranak'i Joda; tsy tahaka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy hitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta; fa nivadika ny fanekeko izy, na dia vadiny aza Aho, hoy Jehovah. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Isiraely aorian'izany andro izany, hoy Jehovah. Te hametraka ny lalàko amin'ny toetrany lalina indrindra aho ary hanoratra izany ao am-pony, ary tiako ho Andriamanitr'izy ireo, ary izy ireo ho oloko »(Jeremia 31, 31–33 Schlachter 2000). Naneho ny fitiavany ny olony indray Andriamanitra ary nanoratra indray tamin’ny fomba manokana, tamin’ity indray mitoraka ity tao am-pon’izy ireo. Mariho anefa fa fanekena vaovao io, tsy toy ny fanekena taloha, mifototra amin’ny fahamendrehana sy ny asa, fa mifandray amin’ny ao anatiny, satria Andriamanitra dia manome anao fahalalana lalina sy fifandraisana amin’ny tenany!
Sahala amin'ilay boaty sigara taloha sy reraka, izay mampahatsiahy ahy ny fantsom-baravarana telo teboka, dia nanoratra tamina toerana mampihomehy koa ny rainay: "eo an-tanany izay mampatsiahy antsika ny tsy fivadihany, ary koa ao am-pontsika ny fampanantenany antsika amin'ny lalàny ara-panahy. fitiavana tia nameno! "
Aoka ho tadidintsika foana fa tena tia antsika izy ary manoratra izany ho porofona.
Dada ô, misaotra anao nampahafantatra fa sarobidy aminao izahay amin'ny fomba manokana - tiako koa ianao! amena